John Deere aka ekedep ihe AI ​​mmalite aka ya traktọ ugbo | Akụkọ akụrụngwa
John Deere aka ekedep onye Ai mmalite aka ya traktọ ugbo
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ngalaba ọrụ ugbo, ọkachasị ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka igwe, anyị ga-ekwu maka John Deere, otu ụlọ ọrụ kachasị mkpa na ngalaba a. Firmlọ ọrụ a achọghị ka ahapụ ya na mmepe nke teknụzụ ọhụụ ma kwupụta ọkwa maka ịzụta Teknụzụ Blue River, mmalite nke Californian nke na-echepụta akụrụngwa mmụta igwe maka ọrụ ugbo.
Nnweta a, nke nwere ọnụ ahịa nke $ 305 nde, na-egosi mmasị nke ụlọ ọrụ a na nyocha ya melite usoro ugbo ugbu a. N'ihe banyere Osimiri Blue, John Deere na-azụta ngwaọrụ ọgụgụ isi nke ga-enyere ndị ọrụ ugbo aka i scanomi ubi, nyochaa ihe ọkụkụ, wepụ ahịhịa ... niile n'otu oge ahụ.
Teknụzụ Blue River, nke akpọrọ "see and spray" nwere igwe ese foto agbakwunyere na ihe ọkụkụ na-eji igwe na-amụ iji mata osisi mgbe niile. Ọ bụrụ na a chọpụta ahịhịa n’etiti ha, a ga-efesa ya ọgwụ na-egbu ihe, ebe ọ bụrụ na ọ bụ akụkụ nke ihe ọkụkụ, a ga-efesa ya na fatịlaịza. Ndi oru ugbo nwere ike hazie ihe ndia nile na ekele maka sistemụ a, Blue River na-ekwusi ike na ihe ruru 90% nke ngwaahịa kemịkal ejiri n'ọhịa nwere ike ịchekwa na mgbakwunye na mbenata ụgwọ ọrụ.
John Deere nọ na-arụ ọrụ na traktị kwụ ọtọ tupu Google na Tesla amalite inwe mmasị na ngalaba a, ọ bụ ezie na mmalite ha nwetara abụghị otu anyị nwere ike ịchọta na ụlọ ọrụ ndị a, ebe ọ bụ na ha mgbe niile nlekọta mmadụ dị mkpa, ebe ọ bụ na ngalaba ha ga-agagharị jupụtara na mgbanwe na ọrụ ndị a na-atụghị anya ha nke naanị ụmụ mmadụ nwere ike ịrụ, ọ dịkarịa ala ugbu a. N'ime oru ubi enwere ike igbanwe akụkụ ụfọdụ, mana ọ dị nwute na ọnweghị teknụzụ na-enye anyị ohere ịwụrụ robot onye ọrụ ugbo na-enye ndị ọrụ ugbo ohere izu ike site n'otu ụbọchị ruo ụbọchị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » John Deere aka ekedep onye Ai mmalite aka ya traktọ ugbo
Samsung Galaxy Note 8 ruru 400 puku nkeji rere ụbọchị mbụ ya